Usuku Lomhlaba inzalo: nini futhi kanjani ukusho
Ngeshwa, akubona bonke intsha yanamuhla ukwazi indlela efanele unakekele impilo yabo. Ngakho-ke, kukhona izinsuku ezikhethekile anikelwe isifo esithile emazweni amaningi. Kulesi sihloko esifanayo, ngifuna ukukutshela ukuthi kukhona kugujwa uSuku Lomhlaba Wonke inzalo, ezihloselwe ukufundisa abantu lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela kuncike phakathi ebuhlotsheni bobulili.
Kuyinto imfihlo ukuthi inkinga kwezifo ezithathelwana ngobulili nokukhulelwa okungafunwa Kuyaziwa. Sekuvele kukhona okuningi iminyaka, kungakhathaliseki ukuthi indawo abayobe bephila ngaleso sikhathi. Nokho, uSuku zokuvimbela inzalo lesiRotuma. He is impela, kodwa kakade uye wathola isithakazelo esikhethekile ku ingxenye odokotela hhayi kuphela, kodwa futhi abantu abavamile. "Lapho kugujwa uSuku Lomhlaba Wonke inzalo?" - kukhona umbuzo okunengqondo. Minyaka yonke lolu iholide lugujwa 26 Septhemba, kodwa okokuqala lokhu kuye kwenzeka ngempela muva nje, ngo-2007.
Ngempela ezithakazelisayo futhi inkinga ukuthi namanje kwaphoqa ukudala i iholide ezithakazelisa kangaka lapha. Kuvele ngesikhathi isinyathelo yenombolo yezinhlangano ukuthi bekwi nempilo yokuzalana abesifazane. Imbangela zonke kwaba nenani elikhulu abakhulelwayo okungahlosiwe aphakathi kwabesifazane omdala namantombazane kakhulu amazwe asethuthukile, okuyinto uxwayiswe abagqugquzeli. Lolu suku lapho kwakusengathi eside Imininingwane umkhankaso okuhloswe ngaso kokulungisa le nkinga. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, lo mkhuba okushintshile, futhi manje Usuku Lomhlaba inzalo kumele ukuxazulula inkinga yezempilo besifazane kodwa futhi wesilisa hhayi kuphela, ngokuyinhloko ukufundisa intsha ezindabeni sokuqapha ngokocansi nokuvikelwa.
Kungani Usuku Lomhlaba inzalo ekuqaleni kwakusadingeka zokulungisa isimo ne abakhulelwe bengahlosile? Zonke izimpendulo - izibalo ezithusayo. Ngokusho kwabantu emhlabeni abantu abangaba yizigidi ezingu-80 abesifazane babhekana nokukhulelwa okungahleliwe futhi ingxenye yesine ka-kubo, futhi kuba 2 million, wanquma ukuba akhiphe isisu (okuyinto ngenhlanhla akuyona njalo kwenziwe ngokomthetho izibhedlela futhi ngezinye izikhathi uphela kabi kakhulu). Ngenxa yalokho, abangaba ngu-70 izinkulungwane zabesifazane ngife ngenxa operation engalungile noma yezinkinga wenza kwalokho.
Futhi into embi lezi zibalo musa ubheke kuphela abesifazane abahlala okubizwa ngokuthi "izwe lesithathu". Ngeshwa, lokhu kuthambekela siyenzeka emazweni athuthukile. Izibalo ezethusayo ziyatholakala futhi maqondana kwentsha ekhulelwayo ithole. Kuphela eYurophu inani izisu zomthetho emantombazaneni kusukela engu-15 kuya kwengu-19 zikhulisa njalo ngonyaka. Ngokuphathelene emthethweni, kungcono kwethuse ukucabanga. Abaholi nenkinga enjalo, eJalimane, Hungary, eSweden, eFinland, France.
Ukwazi lapho kugujwa uSuku Lomhlaba Wonke inzalo, kungenziwa banambitha imizi ngemizi ukubamba imicimbi encane anikezelwe lesi sihloko. Ngakho kuqala kukho konke-ke izinkulumo ezemfundo, okuyinto kufanele amboze hhayi kuphela abafundi kodwa futhi abadala. Kodwa phakathi kwabo kukhona akubona bonke abangabohlobo ujwayelene yezindlela zesimanje inzalo, usebenzisa amakhondomu noma helices kuphela (ezimweni zabesifazane).
Little eyaziwayo iningi namuhla embuzweni ukusetshenziswa of izinto zokuvimbela inzalo ngomlomo. The main yokwesaba - ukuthatha hormone, okungase kubangele izinkinga eziningi, kuhlanganise isisindo somzimba kanye owesifazane eqinile. Lena ngenye yama-izinganekwane, ngoba izinkinga ezifana ne Ukukhetha efanele kanye nokusetshenziswa Kulungile yesimanje nje engekho.
Ingxoxo kudinga ingqikithi ezifana ubulili intsha kuqala. Nalapha futhi kukhona kuyinganekwane ukuthi akunakwenzeka ukuba uthole abakhulelwe okokuqala. Ngaphezu kwalokho, abantu abasha cishe ukucabanga futhi wazi ukuthi kukhona abathwali izifo ezihlukahlukene ezithathelwana ngobulili. Khuluma futhi sixoxa ngalokho kungenzeka. Into eyinhloko ukwethula umthetho okungenani kanye ngonyaka ezikhungweni zemfundo abasemazingeni ahlukahlukene umeme odokotela, okuzoba wonke ujwayelene ezicashile ezindabeni ezihlukahlukene. Futhi uma kungenzeka, kuyoba mnandi ukuba ahlele futhi izinkulumo abadala, igumbi, cishe, babeyobusiswa Sasiminyene.
enye Ungakwenza kanjani ukugubha uSuku World of izinto zokuvimbela inzalo? Kungani ungenzi ezinye uhlobo senzo zemfundo? Kukhona zonke izinhlobo izindlela ezifanele. Kungaba Imibuzo ezincane abedlula ngendlela, izigcawu nje noma emincanyana, ungenza umdwebo phezu kwendawo egandaywe ngamatshe ngokuvumelana isihloko. Kuhle ukusabalalisa ezihlukahlukene izincwadi ngalolu daba. Abantu abaningi bayayijabulela i ukusatshalaliswa khulula kwamakhondomu. Kodwa ukuze uthole isipho esincane kangaka, uzodinga uphendule imibuzo embalwa, ngakho ukufunda okuthile okusha. Kuthiwa isenzo - yindlela enhle ukuba adonsele ukunakekela abantu kule nkinga.
Enye indlela yokuzivikela bagcine Usuku zokuvimbela inzalo ku 26 Septhemba. Ungakwazi ukuqoqa intsha futhi wenze flashmob ezinezihloko. Kuthiwa lokhu ingenye "ingxoxo" esisha izindlela zomphakathi zabantu ngubani aluthola udumo ezithile. Futhi uma akusiyo ekuqaleni kahle kubo bonke abantu ukuthi ncamashi amehlo futhi ngale ndlela kuzokwenza okungenani ajwayelekile ambalwa nale nkinga futhi ophumayo izindlela kuwo.
Nokho, kukhona Umhlaba Inzalo Day. Ngakho abantu bangakwazi yazi nge ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ebalulekile nemininingwane empilweni obuseduze. Nokho, kudingeka le nkinga asivelanga. Yini engenziwa kuleso simo? Kulula: udinga ukufundisa kahle ebuntwaneni izingane ekuqaleni, ngicela ungadluli usuke umbuzo onjalo, njengoba ingxenye ngokocansi ukuphila kwawo wonke umuntu.
Ngokuqondene emazweni post-Soviet, lapha kukhona inkinga enkulu. Phela, ukhulume ngokukhululekile nezingane ngezocansi, thina nje baye bathatha hhayi ukuthi kamuva kudala izinkinga eziningi ezahlukene. Futhi kufanele kwenziwe ngisho ezincane imvuthu iminyaka. I ngakho ngaphezulu ngoba kukhona nezincwadi eziningi ezahlukene, amathiphu kanjani ukwenza kahle. Sethemba, konke zizoshintsha maduze, futhi ngoSuku zokuvimbela inzalo akuyona into iyamangaza noma eyihlazo nakakhulu ngenxa yabantu bakithi.
Cafe ihholo idili
Kanjani ukugubha ingane ngonyaka 1? Amathiphu ugogo wazibonela
Inverter imishini Welding: wesifunda. Ukukhethwa imishini Welding
9000 I-Saab, IsiSwidi imoto wobuciko
Fingerless obumbene crocheted: ukunitha scheme, izithombe, izincomo